Paris Saint-Germain Oo Kalsooni Ku Qabta In Kylian Mbappe Uu Saxiixi Doono Heshiis Cusub
HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo kalsooni ku qabta in Kylian Mbappe uu saxiixi doono heshiis cusub
September 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Agaasimaha isboortiga Paris Saint-Germain Leonardo ayaa ku kalsoon in Kylian Mbappe uu heshiis cusub u saxiixi doono kooxda reer France inkastoo ay si aad ah u xiiseyneyso Real Madrid .
Qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ee Paris ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, waxaana la filayaa in Real Madrid ay ku soo laaban doonto adeegiisa sannadka 2022, maadaama ay seegtay heshiiskii uu kula jiray suuqii dhawaa.
Sida ay hadda tahay, ku guuleystaha Koobka Adduunka wuxuu xor u ahaan doonaa inuu wadahadalo la galo Los Blancos si uu heshiis hordhac ah ugu saxiixo bisha Janaayo, laakiin Leonardo ayaa kalsooni ku qaba in 22 jirkaan uu sii joogi doono caasimadda Faransiiska.
“Ma arko Mbappe oo baxaya dhammaadka xilli ciyaareedkan, qofna kama fekerayo mustaqbalka Paris Saint-Germain la’aanta Kylian,” ayuu Leonardo u sheegay Canal Plus .
Xiriirka Kylian iyo Paris Saint-Germain waa mid qoto dheer. Taasi waa sababta aanan uga fikirin wax kale.
“Kylian wuxuu matalaa waxyaabo badan, kaliya maahan inuu yahay Faransiis ama mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka, wuxuu leeyahay hab uu ku noqdo midka aan jecelnahay iyo midka qof walba jecel yahay”.
Mbappe ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku qaadanaya kooxda Mauricio Pochettino bilowgii ololihii 2021-22, isagoo dhaliyay afar gool sidoo kalena caawiye ka noqday shan kale oo Ligue 1 ah.